तिथि मेरो पत्रु »7एक रोमान्टिक सम्बन्ध लागि सुझाव
प्रेम दूत आफ्नो ढोका ढकढक्याउन छ? तपाईं भाग्यशाली को हो, तर अब तपाईं ज्वाला राखन छ. अनन्त जोडीले गर्छन् कसरी? तपाईं आफ्नो दिशा मा हेर्न सही हो र तिनीहरूबाट केही सिक्ने प्रयास. यहाँ आफ्नो रहस्य र केही सुझाव केही तपाईं एक सफल रोमान्टिक सम्बन्ध कायम मदत गर्ने हो:
1. आफैलाई भरोसा
यो तपाईं बारेमा सबै छैन, तर सम्बन्ध विषयहरूमा को एक धेरै दुई साझेदार मा आफ्नो स्रोत फेला’ आत्म-विश्वास. वास्तवमा, कसैले मायालु सामु, तपाईं आफैलाई पूर्ण सहमति हुन छ, प्रेम र आफैलाई भरोसा गर्न. एक दम्पतीले मा भएको कसैको फिर्ता पछि लुकाउन मौका छैन. त्यो / त्यो उज्ज्वल छ? त्यो / त्यो तपाईं संग छ किन आफैलाई नसोध्नुहोस्. बरु, तपाईं एउटा राम्रो म्याच सुनिश्चित हुन. त्यो / त्यो पनि तपाईं जस्तै कसैसित हुन मौका छ. भरोसा नभई, के तपाईं के गर्दै छन्, त्यसको लागि आफूलाई देख्न गर्नुपर्छ, र के को लागि आफ्नो साथी तपाईंलाई मा देख्नुहुन्छ.
2. आफ्नो डाह Doze
एक जोडी हुनु नै निर्देशन सँगै हिंड्ने अर्थ. प्रत्येक अन्य भरोसा राख्दा आवश्यक र सीधा आफ्नो आत्म-विश्वास गर्न सम्बन्धित छ. तपाईंको साथी एक पल्ट मित्रहरुलाई कुनै साँझ बाहिर छ योजना? उहाँलाई / उनको केही ठाउँ दिनुहोस् र प्रश्नहरूले तिनीहरूलाई आक्रमण छैन: तपाईं कहाँ थिए? त्यहाँ बालिका / मान्छे थिए? डाह बोझिलो छ र यो पक्कै पनि कसैले पठाउन सबै भन्दा राम्रो तरिका हो.
3. प्रत्येक अन्य सहयोग
एक दम्पतीले मा भएको सबै भन्दा राम्रो कुरा को एक तपाईं आवश्यकता समयमा समर्थन गर्न कसैले हुन्छ. प्रोत्साहन स्वीकार, आफ्नो साथी आवश्यक गर्दा र यस्तै मनोवृत्ति अपनाउने. एक सफल सम्बन्ध मा छ जो कोहीले रोमान्टिक साझेदार हो कि तिमीलाई भन्नेछु, सबै को पहिलो, इमानदार र प्रत्येक अन्य मित्रहरुलाई समर्थन, र मात्र पछि, प्रेम गर्ने.
4. प्रत्येक अन्य चकित
हामी सबै दिनचर्या को नतिजा महसुस, ओछ्यान आलु मा तपाईं र तपाईंको स्वीटी उत्तेजित गर्दछ कि यस जंग. हामी सबै हाम्रो जीवन भर्ने हाम्रो सानो बानी छ, तर तपाईं आफ्नो सम्बन्ध गरेको ज्वाला राखन गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो जीवन मा कुनै पनि twists बिना दैनिक तालिका द्वारा अवशोषित नहीं मिल प्रयास. सँगै बाहिर जाओ, नयाँ अनुभव साझेदारी. कि प्रेम सम्झना एक बच्चा जस्तै छ, यो खुवाउनु गर्न आवश्यक.
खुलस्त कुराकानी एक शक्तिशाली सम्बन्ध गर्न surefire तरिका हो. यो तपाईं र एकअर्कालाई राम्ररी चिन्ने मदत, तपाईं विभिन्न विषयहरुमा महसुस कसरी बुझ्न, र दृष्टिकोण को दशकको अन्य बुँदा हेर्नुहोस्. बालुवा महल निर्माण नगर्नुहोस्! प्रत्येक अन्य कुराकानी र आफ्नो सम्बन्ध गरेको जग ठोस मा cemented गरिनेछ.
6. आफैलाई लागि केही समय लिनुहोस्
एक सम्बन्ध समर्पित समय चाहिन्छ, तर यो प्रत्येक साथी भनेर छेउमा केहि पनि हुन सक्दैन भन्ने होइन. तपाईं अझै पनि आफ्नो मित्रहरुलाई छ, आफ्नो सोख र आफ्नो काम! तिनीहरूलाई र एक्लै आफैलाई केही समय अर्पण. आफ्नो साथी अलग्गै केही घण्टा तपाईं सम्झना बनाउन र अधिक प्रत्येक अन्य सराहना गर्नेछन्.
7. प्रत्येक अन्य इमानदार हुनुहोस्
निष्कपट सम्बन्ध कुनै प्रकारको लागि एक समझदार आधार छ. प्रत्येक अन्य मौखिक वा गैर-मौखिक आफ्नो भावना संवाद इमानदार हुनुहोस्. यो केवल आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउन हुनेछ.